ओठ मा लामो किस गरे र यस्पटक उनको मुख भित्र जिब्रो हलिदिए - Indian Girls Nude XXX Images
ओठ मा लामो किस गरे र यस्पटक उनको मुख भित्र जिब्रो हलिदिए
चिक्दै जादा मेरा गेडा ले ठोकेर होला प्वत्-प्वत आबज आएको थ्यो भने, लाडो को घर्सडले गर्दा क्वच्-क्वच आबज पनि आइरखेको थियो। मेरो पुती फोर्देउ बाबा, कति मजा आको अ अ अ गर्दा पुरै गेडा पस्नी गरेर चिक्दै थिए म। संसार सबै भुलेको थिए। अजै जोड ले छिटो- छिटो गर्दै थिए मेरो पनि लाडो को छाला च्यातिए पनि च्यातियोस भनेर झन भित्र पसाउन खोज्दै थिय मलाई फुसी झर्ला जस्तो हुन मन लाग्यो। मेरो त झर्न लायो नानु भन्दैथिए मैले कन्ट्रोल गर्नै सकिन ५,६ चोटि झन छिटो-छिटो-छिटो पेलेको मात्रै थिय एकैचोटी धचक्क ठेल्दा पुरै फुसी निक्ल्यो। धेरै बेरसममा लाडो बाहिर निकाल्नै सकिन पुरै फुसी भित्र नै झर्यो। एक्पटक लास्ट्मा लाडो पुती भित्र हुँदै येसो तल हेरको मेरो त जरा सममै भित्र पसेको रैछ, भाउजु ले मेरो अनुहार हत्केला मा लिएर मलाई एक मिठो लामो किस गरिन आफ्नो निधार मेरो निधार मा जोडिन र मुसुक्क हासिन्। म आस्तेले लाडो बाहिर झिके छेवोइमा तेतिकै उत्तनो परेर सुते। उनी पनि एक छिन् त्यसरी नै बसिन र केही बेर पछि बाबा धेरै बेर भैसकेको रछ उठ्नोस भनिन्। म उठेर कपडा लगाए र उनले पनि। अब हामी बीच बोल्ने कुनै शब्द थियन, मैले उनलाई टाउको मा समातेर एक छोटो किस गरे र अब जानु पर्छ भने। उनले गह भरी आसुँ पारेर कहीले जानुहुन्छ? काठमाडौं गएर मलाई नभुल्नु है! भनिन , मेरो धड्कन हौ तिमी कसरी भुल्न सक्छु म भनेर फेरी छोटो किस गरेर उठे। अनी म पहिला हिंडे र केही बेर पछि उनी पनि घर आइन्
← सानीमाले मेरो दुउध को मुन्त चुस्न थालनु भयो	डोगी style ले चिक्दा मजा अउछारे-मेरो-बिदेशबाट फर्किएको श्रीमान् →